Global Voices teny Malagasy » Inona Marina Ny Hackathon? Ary Inona Ny Angon-Drakitra Misokatra? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Novambra 2012 4:02 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Arellano Nandika (en) i L. Finch, Nancy
Sokajy: Amerika Latina, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Teknolojia mampangarahara asa
Efa nambaranay tamin'ny lahatsoratra teo aloha , ny hackathon  manaraka ho an'ny faritra Amerika Latina : Fampandrosoana an'i Amerika Latina 2012  [es]. Saingy toa misy mpamaky sasany mety tsy hahazo ny tena dikan'ny hackathon, sy ny ilàna azy.
Martín Onetto avy amin'ny Red Users  [es] dia namoaka hevitra [es] mikasika ny fiavian'ny teny :
Ny Wikipedia amin'ny fiteny Espaniola dia manana ampahan-dahatsoratra  [es] izay mamaritra tsara ny atao hoe hackathon :
teny fampiasa amin'ny tontolon'ny hackers (mpijirika) mba hilazàna fotoana iray izay hivorian'ny mpamolavola rindrambaiko  hiaraha-manangana lozisiely  izy io. Mety haharitra roa andro ka hatramin'ny herinandro io fivoriana io. Lafiny roa no tanjona amin'izany : ny voalohany, fandraisana anjara amin'ilay tetikasa misokatra izay vao hoforonina, ary ny faharoa, mianatra milamina nefa azo antoka.[Fanamarihana: jereo ny lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia amin'ny teny Anglisy raha mila fanazavana fanampiny.]
Inona ary izany ny angon-drakitra misokatra ? Raha jerena ao amin'ny Wikipedia  miteny Espaniola, dia ho hitantsika fa,
Filôzofia (fahendrena)  sy fomba fanao iray dia ny hoe tokony ho an'n'ny tsirairay hidirna malalaka ny angon-drakitra, tsy misy teritery amin'ny resaka zonny mpamorona, na alàlana na fomba fanaraha-maso hafa. Ny tanjon'ny hetsika angon-drakitra misokatra dia mitovy amin'ireo hetsika sasany sy fiaraha-monina misokatra toy ny lozisiely malalaka, open source  ary open access.  [Fanamarihana: jereo ny lahatsoratra amin'ny Wikipedia amin'ny teny Anglisy raha mila fanazavana fanampiny .]
Ny Open Data Handbook , volavolan'asan'ny Open Knowledge Foundation , dia manao ireto famaritana ireto :
Nitafatafa tamin'i Mariano Crowe, hacker sady mpiara-mitantana ny Escuelab  [es], vovonana fianarana sady habaka iaraha-mampivoatra any Lima, Pero izahay, mba hahalalàna bebe kokoa ny momba ny angon-drakitra misokatra.
Vao tsy ela akory izay, David Sasaki, avy amin'ny Omidyar Network , namintina [es] ny toetra fototry ny angon-drakitra misokatra tao anaty lahatsoratra mitondra ny loha-teny hoe “The Eight Main Principles of Open Data (and Hipsters)” “Ireo Fototra Valo Lehiben'ny Angon-drakitra misokatra (sy Hipsters)”:
Ny AESIC, Agency for Electronic Government and Information Society of Uruguay na Masoivoho fitantanana ny elektronika sy ny orinasan'ny filazam-baovao any Orogoay, no misahana io resaka io ao amin'ny firenena, ary amin'ny ampahan'ny tranonkalany natao ho an'ny angon-drakitra misokatra, manoratra  ny antony tokony hitandremantsika io fikambanana io :
- Eo amin'ny sehatry ny fitaterana, Mankaiza ny volako ?  dia rindrambaiko Britanika fampiasa anaty tranonkala mampiseho ny fomba fandanian'ny governemanta any an-toerana ny vola voaangona avy amin'ny hetra. Misy rindrambaiko azonao hanarahana ny fizotry ny fanaovan-dalàna ao amin'ny parlemanta any Danemarka sy any Brezila .
- Ny sehatry ny fanomezam-baovao ara-jeografika dia isan'ireo efa mandroso, ampian'ireo rindrambaiko maro ahazahoan'ny mponina tombontsoa. Ny Fiara fitateram-bahoaka an-drenivohitra ara-potoana  [es], any Espaina, dia ahitanao ara-potoana ny toerana misy fiara fitateram-bahoaka sy ny elanelam-potoana mandra-pahatongan'ny fiara fitaterana manaraka. Azo heverina ho “Wikipedia -n'ny Sarintany” ny OpenStreetMap . Manome an-kalalahana ary tsy misy fepetra angon-drakitra ara-jeografika ho an'ny tsirairay io.
Ohatra maro momba ny rindrambaiko novokarina tamin'ny angon-drakitra misokatra no azo jerena ao amin'ity rohy iray avy amin'ny AGESIC ity, ao amin'ity rohy  avy any amin'ny governemantam-paritr'i Andalozia ity, ary ao amin'ity rohy  avy any amin'ny Generalitat-n'i Katalonia ity. Fanampin'izany, ho hitanareo ao amin’ ity lahatsoratra avy any Ticbeat ity ireo rindrambaiko 10 izay tian'ny olona hovokarina amin'ny fampiasana ny angon-drakitra misokatra.
Mpamokatra lozisiely ve ianao ? Omeo izay kely avy aminao mba hahatonga ny toerana honenanao ho mendrika kokoa. Eo am-pamakiana ity lahatsoratra ity, manan-kevitra hahafahana miara-miasa ve ianao ? Misoràta anarana  [es] mba hampivoatra an'i Amerika Latina ary mandraisa anjara
Ny lahatsoratra Voalohany  [es] dia naseho tamin'ny bilaogin'i Juan Arellano.
Ny lahatsary voalohany amin'ity lahatsoratra ity dia nosoratan'ny ireireireire  ary namboarin'i Laura Rebollo Quero . Ny lahatsary faharoa kosa dia Sonia Ordoñez  no nanoratra sy nanamboatra azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/11/14/39799/
 lahatsoratra teo aloha: https://globalvoicesonline.org/2012/10/11/developing-latin-america-2012/
 Fampandrosoana an'i Amerika Latina 2012: http://2012.desarrollandoamerica.org/
 namoaka hevitra : http://www.redusers.com/noticias/primer-%E2%80%9Chackathon%E2%80%9D-de-datos-publicos-y-gobierno-abierto-en-argentina/
 ampahan-dahatsoratra : http://es.wikipedia.org/wiki/Hackathon
 mpamolavola rindrambaiko : http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_programmer
 manangana lozisiely: http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_software_development_model
 Filôzofia (fahendrena): http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
 zonny mpamorona, na alàlana : http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
 lozisiely malalaka, : http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software
 open access.: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
 lahatsoratra amin'ny Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
 famaritana : http://opendatahandbook.org/en/what-is-open-data/index.html
 namintina : http://davidsasaki.name/2012/08/los-ocho-principios-de-los-datos-abiertos-y-los-hipsters/
 manoratra : http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1544/1/agesic/conceptos_basicos_de_datos_abiertos.html?menuderecho=2
 rohy : http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1545/1/agesic/ejemplos_de_uso_de_datos_abiertos.html?menuderecho=2
 ity lahatsoratra : http://www.ticbeat.com/analisis/aplicaciones-datos-abiertos-web-semantica/
 Misoràta anarana: http://2012.desarrollandoamerica.org/inscribete/
 Ny lahatsoratra Voalohany: http://arellanojuan.com/explicando-que-es-una-hackathon-y-que-son-los-datos-abiertos/